Amasiko Nemikhuba Yase-Indonesia | Izindaba Zokuhamba
USusana Garcia | | Cultura, Indonesia, Ukuhamba kwe-Asia
I-Indonesia iyisiqhingi esisenkabazwe ukuthi ineziqhingi ezingaphezu kuka-17.000, lapho amakhulu kunawo wonke yiSumatra, iKalimantan noma iJava, eyokugcina ingenye yezinto ezibaluleke kakhulu ngokwesibalo sabantu.
Leli zwe eliyisiqhingi phakathi kweNingizimu-mpumalanga ye-Asia ne-OceaniaNjengendawo yokudlula yamatilosi enza imizila yezohwebo, ithole amathonya amaningi amasiko, ngakho-ke sizothola ukwehluka okukhulu kuyo.
2 Inkolo e-Indonesia
3 Amasiko nemikhuba
6 Amaphathi nemikhosi
Kusisiza ngaso sonke isikhathi ukuzibeka thina nokuqonda kancane amasiko namasiko endawo ngayinye. Isimo sakhe simenza abe indawo yezohwebo yabantu abaningi base-Asiya, futhi iningi labantu bakhona lingabokudabuka eMalay. Kwakungaphansi kwethonya lamaDashi, kwathi ngo-1945 lathola ukuzimela ngaphandle kweNetherlands noSukarno.
Ngo-1968 igunya lakhe lathathelwa indawo nguSuharto, owadala ubumbano oluningi e-Indonesia kodwa ngengcindezelo. Ngo-1998 wesula esikhundleni ngenxa yokungaphatheki kahle kwabantu ngemuva kwenkinga yezimali yase-Asia. Kusukela lapho kuqhubeke, kwaba nokhetho lwentando yeningi ezweni. Njengamanje, umnotho wayo usekelwe imali etholakala ngokuthumela uwoyela ngaphandle negesi yemvelo, ukuba yilungu le-OPEC, kanye nokuvela kwezokuvakasha.
Inkolo e-Indonesia ibaluleke kakhulu ekuchazeni isiko nempilo yase-Indonesia. Kwakhe umthethosisekelo uqinisekisa inkululeko yenkolo inqobo nje uma kusekelwe kunoma yiziphi kulezi ezinhlanu ezisemthethweni, okuyi-Islam, Catholicism, Protestantism, Buddhism kanye ne-Hinduism.
Okwamanje, ngaphezu kwabantu abangama-80% bangabenkolo yamaSulumane. Abaholi bokuqala bama-Islamist eJava babehlonishwa njengama-walis noma abangcwele, bakha izinganekwane ezibazungezile, yize inkolo yama-Islamist yayenqabela ukukhonzwa kwabangcwele. Abesifazane ababophekile ukugqoka iduku, yize ukusetshenziswa kwalo kuya ngokuya kwanda. Ngaphezu kwalokho, amadoda angashada nabesifazane ababili, inqobo nje uma benemvume yowesifazane wokuqala.
AmaPutukezi angenisa ubuKatolika, yize kusukela ngekhulu le-XNUMX laqala ukuba nethonya elincane. UbuHindu buyenziwa eBali, futhi UbuBuddha busetshenziswa iningi labantu baseChina.
Lapho sivakashela kwenye indawo, kuhle ngaso sonke isikhathi ukubona ukuthi amasiko abo kanye nokusetshenziswa kwabo kuyini lapho bexhumana nomphakathi ukugwema ukungaqondani kanye nezimo eziyihlazo. Ezindaweni ezisemadolobheni kunethonya elikhulu lasentshonalanga, yize ezindaweni ezisemadolobheni izindawo zasemakhaya, isiko lendabuko elithe xaxa lisalondoloziwe. Kuzo, eminye imikhuba nemithetho iyalandelwa ukuhlala emphakathini, umndeni ubaluleke kakhulu.
Uma siya ezindaweni zomphakathi lapho kufanele wenze khona izinto ezisemthethweni, ezinjengamaphepha, kungcono ukuhamba nengubo efanelekile nenenhlonipho, egqoke ngokwengeziwe. Ezindaweni ezinjengamathempeli noma izigodlo, kufanele amboze amahlombe, futhi imvamisa kufanele ugqoke i-batik, itshali okhalweni.
Kufanele futhi kunakwe lokho kubo inhloko iyingxenye engcwelea, okungafanele ithintwe, ngakho-ke kufanele sigweme ngisho nokushukuma komzimba okubonakala kukuthinta ngokuthinta ikhanda. Ngakolunye uhlangothi, kufanele wazi ukuthi isandla sokudla yiso abasisebenzisela ukudla, futhi kufanele futhi sisetshenziselwe ukunikeza noma ukwamukela okuthile, njengombukiso wenhlonipho, ngoba isandla sobunxele kufanele sigcinelwe okuningi izenzo ezingcolile ezifana nenhlanzeko. Okunye okuzodonsa ukunaka kwethu ukuthi bahlale bekhumula izicathulo ukungena endlini, nokuyinto engajwayelekile lapha. Kodwa-ke, bathi abantu base-Indonesia bangesinye sezizwe ezimnandi kakhulu futhi ezijwayelene nabantu, ngakho-ke ngeke sibe nezinkinga eziningi ukuxhumana nabo.
Izembatho nazo zizoba yinto ethokozisayo esithandayo kusukela kumzuzu wokuqala. Yize namuhla kunabantu abaningi abagqoka ku Imodi yaseNtshonalanga, ikakhulukazi abantu abasha nasezindaweni ezisemadolobheni, kusekhona isiko elihle ezingutsheni ezifanele isimo sezulu esishisayo.
Abesilisa nabesifazane bagqoka ngokufanayo isarong Ezindaweni eziningi, kungunxande wendwangu okhalweni, njengoba nje sibopha amathawula ethu lapho siphuma eshaweni. Kukhululeke kakhulu kubo futhi ungabona izindwangu ezinemibala ehlukene namaphethini, ugcine okungcono kakhulu ngezikhathi ezikhethekile.
Ngaphezu kwalokho, isarong, okuvelele i-kebaya, okuyihembe elejwayelekile labesifazane base-Indonesia. Yibhantshi elinemikhono emide, elinezicucu, elingenakhola futhi lifakwe izinkinobho ngaphambili. Kwesinye isikhathi iba sobala, ngakho-ke indwangu emboza i-torso ebizwa ngokuthi i-kemban noma i-corset ivame ukugqokwa ngaphansi.
Emadodeni uyabona futhi i-peci, isigqoko esivamile, noma nesikhafu sasekhanda. Konke kuncike endaweni esikuyo.
I-Gastronomy e-Indonesia iyahlukahluka ngesifunda, njengoba iyi- ukuxubana kwamathonya amaShayina, aseYurophu, aseMpumalanga nawaseNdiya. Ilayisi yisithako esiyinhloko, esivame ukuxutshwa nenyama noma imifino. Futhi, ubisi lukakhukhunathi, inkukhu noma izinongo kubalulekile.
Kunezitsha eziningi esingazama uma siya e-Indonesia. INasi Campur ilayisi elihlanganiswe nenkukhu, imifino, isoya kanye ne-tortilla. ILumpia umqulu wentwasahlobo onethonya lamaShayina onenyama, imifino, nama-noodle wesoya. IKari ayam yisitshulu senkukhu esinemifino, isoso sekhari, ubisi lukakhukhunathi nelayisi elimhlophe eliphekiwe. I- INasi goreng ngesinye isidlo esijwayelekile, irayisi elithosiwe ngemifino, inkukhu, ama-prawn namaqanda.
Izinhlobonhlobo ubuhlanga de Indonesia kubonakala kwabo amaqembu y imikhosi. phakathi NgoFebhuwari nangoMashi kubanjwa izivivinyo zokulwa Sumba ezikhumbula i- izimpi yokubhujiswa mutual. Phakathi kukaMashi no-Ephreli i usuku olwandulela unyaka omusha Balinese ngamunye, lapho, kuzwakala umsindo we amadubhu okwethusa lokho imimoya emibi, izithonjana ze- amathempeli.
Omunye umkhosi obalulekile umkhosi waseBalinese we Galungan, yezinsuku eziguquguqukayo, lapho kuthiwa khona onkulunkulu behlela ku umhlabathi ukujoyina amaqembu okomhlaba. Kuyafaneleka nokuba khona ku- Isiqhingi saseLarantuka ngodwendwe olubalulekile lwe Semana Santa futhi ku URuteng kwabadlali be-duels imvubu ngo-Agasti. Ngaphezu kwalokho, phakathi kuka-Agasti no-Okthoba i amadili omngcwabo AmaTrojans ku IsiSulawesi.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » General » Cultura » Amasiko namasiko ase-Indonesia
Uhambo Lokuzithandela Lwabasha
Izizathu zokuhamba wedwa